लगानीकर्ताले कहाँ पाउन, र कसरी गर्ने? एउटा सानो व्यापार को लागि एक निवेशक, परियोजना को लागि एक सुरुवातमा कहाँ फेला पार्न?
व्यवसाय चलिरहेको अक्सर महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित आवश्यक छ। संवाददाता राजधानी, को होनहार सुरुवातमा बजार को समसामयिक निकासी मा एक निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् यसको भूगोल, उत्पादन को आधुनिकीकरण विस्तार, क्षेत्र यसको पहिचान सुधार। जहाँ यो एक निवेशक पाउन सम्भव छ? उहाँसँग भरोसा सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने?
कुन उद्देश्यका लागि एक निवेशक लागि देख रहे हो?
लगानीकर्ताले कहाँ फेला पार्न बारेमा सोच अघि, यो क्रम तपाईं साझेदार खोजी गर्न चाहनुहुन्छ कुन उद्देश्यका लागि, वास्तव मा, निर्धारण गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, यो समस्या व्यापार मालिक द्वारा हल छ। प्रचार निवेशक यसलाई पूर्णतया व्यापार परियोजना महसुस गर्न व्यक्तिगत निपटान मा धन को एक अपर्याप्त रकम उपस्थिति आवश्यक छ। आवश्यक कोष हुन सक्छ, र निवेशक प्रदान चासो - पछि को कम्पनीको कारोबार वृद्धि मा लाभ उठाउन।
निवेशक संग सम्बन्ध निर्माण को तंत्र के हुन्?
साथै, तपाईँले लगानीकर्ताले कहाँ फेला पार्न सोचिरहेका सुरु गर्नु अघि, उद्यमी एक साझेदार व्यवस्था संग चाहेको भवन सम्बन्ध निर्णय गर्न आवश्यक छ। ती धेरै हुन सक्छ।
पहिले, वित्त प्रदान गर्न इच्छुक छ जो साझेदार संग उद्यमी सम्बन्ध, एक प्रत्यक्ष लगानी हुन सक्छ। यो संयन्त्र संगठन, व्यापार रणनीति को परिभाषा को प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा संलग्न एक साझेदार लागि विनिमय मा कम्पनी धन को प्रावधान समावेश छ।
दोश्रो, वित्तपोषण को पोर्टफोलियो लगानी सर्तहरू अन्तर्गत संलग्न गर्न सकिन्छ। यो संयन्त्र पनि कम्पनी को सम्पत्ति मा एक शेयर प्राप्त गर्दा, व्यापार विकास पैसा लगानी, कि पार्टनर सुझाव। पहिलो मामला मा, निवेशक लाभ - संभावित ठूलो मात्रा उद्यम को व्यवस्थापन भाग र व्यापार समुदाय को एक प्रभावशाली सदस्य बन्न। कम्पनी को विकास को मामला मा दोस्रो साझेदार, यो एकदम आफ्नो राजधानी वृद्धि गर्न सक्षम छ।
लगानीकर्ताले के हुन्
अन्य कारोबार लगानी गर्न इच्छुक साझेदार को विशेष को विचार - लगानीकर्ताले कहाँ फेला पार्न मामिला सम्बोधन गर्नु अघि, उद्यमी अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि अर्को विवरण। प्रासंगिक कानुनी गर्न पार्टीहरूलाई बन्न कि प्रजा, प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ: व्यक्तिहरूलाई, संगठन। दुवै छन्, बारी मा, उद्यम लगानीकर्ताले र मौलिक परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् कि ती रूपमा वर्गीकृत छन्। लगानीकर्ताले पनि रूसी र विदेशी हुन सक्छ।
सरकार को डिग्री - वित्त को व्यापार संग कानुनी सम्बन्ध संलग्न अभिनेता को वर्गीकरण लागि अर्को मापदण्ड। त्यहाँ राज्य एजेन्सीहरू छन् - धन हुर्काउन वा तिनीहरूलाई प्रदान व्यापार सहायता द्वारा प्रदान धन को सबै भन्दा। त्यहाँ एक पूर्ण निजी कम्पनी हो।
त्यहाँ लगानीको क्षेत्र मा कानूनी सम्बन्ध को एक विशेष वर्ग छ - crowdfunding। व्यक्तिगत वा सामाजिक समूह एक सम्पूर्ण रूपमा समाज प्रतिनिधित्व - यो अवधि मानिसहरूको ठूलो संख्या व्यापार रकम आकर्षित को संयन्त्र पारस्परिक रहेको छ। नियम, crowdfunding भित्र उद्यमीहरू रकम प्रदान लगानीकर्ताले, तिनीहरूलाई कुनै पनि दायित्व विनिमय मा एक शेयर व्यापार को लागि आयातित वा कम्पनी को व्यवस्थापन भाग छैन। यो सुविधा सान्दर्भिक सम्बन्ध वृद्धि लोकप्रियता निर्धारण गर्छ। धेरै उद्यमीहरू, जहाँ मुख्यतया crowdfunding गर्न विशेष उल्लेख, लगानीकर्ताले पाउन बारेमा सोच।
के लगानीकर्ताले चासोको विषय सक्छ?
हामीलाई अब व्यापार वित्त को मामला मा उद्यमीहरू र साझेदार सम्बन्ध यस्तै छ भनेर व्यावहारिक nuances एक नम्बर विचार गरौं। तपाईं परियोजनाको लागि एक निवेशक जहाँ फेला पार्न सोच्न अघि, व्यापार परियोजना को आकर्षण को पक्ष ध्यान गर्नुपर्छ त - ती संकेतक जसको लागि सम्भावित साझेदार कम्पनी मा धन लगानीको निर्णय गर्दा खोज्न हुनेछ। जो मान्छे?
सबै को पहिलो, यो सामान र सेवाहरू कम्पनी को उत्पादन कि को बिक्री को लागि बजार पर्याप्त मात्रा मा उपलब्ध छ। दोस्रो सूचक - उद्योग को गतिशीलता। लगानीकर्ताले कम्पनी द्वारा बेचिएको उत्पादन, लामो समय को लागि बजार मा मांग थियो भन्ने तथ्यलाई रुचि राख्नुहुन्छ। यसलाई संचालित जसमा उद्योग को गतिशीलता, कम्पनी पर्याप्त उच्च हो भने, साझेदार मालिक हुनुहुन्छ जो प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु को उत्पादनहरु कमसल माल को समसामयिक जारी सुनिश्चित गर्न सक्षम हुने निश्चित छ।
वास्तवमा, प्रतियोगिता को स्तर - लगानीकर्ताले लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक। यसलाई उच्च गर्न बेहतर हुन, र केही अन्य साझेदार लागि हुन सक्छ - कम। पहिलो मामला मा, निवेशक र उद्यमी निर्मित सामान लागि पर्याप्त स्थिर मांग को उपस्थिति को फाइदा लिन र एक उच्च गुणवत्ता वा बजार आपूर्ति उत्पादनहरु को कम मूल्यहरु को खर्च मा प्रतियोगिहरु लड्न सक्नुहुन्छ। कम प्रतियोगिता कम्पनीको लाभकारी को दृश्य को बिन्दुबाट आकर्षक छ। निस्सन्देह, त्यहाँ कम्पनी द्वारा उत्पादित सामानहरूको लागि मांग हुनेछ प्रदान।
व्यापार योजना को वैधता - परियोजना को वित्त सन्दर्भमा निवेशक द्वारा सकारात्मक निर्णय को ग्रहण लागि अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड। बजार सबैभन्दा अनुकूल अवस्था, माग र प्रतियोगिता को अधिकतम अवलोकन स्तर देखि उत्पन्न गर्न सक्छन्, तर कर्मचारी जो अन्तर्गत कम्पनी यी लाभ लाभ उठाउन हुनेछ एक योजना प्रदान गर्दैन भने, निवेशक को कम्पनीको वित्तीय संभावनाहरु jeopardize सकेन।
व्यापार मालिक जो रन क्षमता टीम, - अर्को कारक परियोजना सकारात्मक निर्णय साझेदार को ग्रहण छ। वा आफ्नो व्यक्तिगत। बजार अवस्था राम्रो व्यापार योजना हुन सक्छ - विस्तृत सविस्तार, तर कार्यान्वयन हुनेछ यो untrained मानिसहरूले गरिनेछ भन्ने कारण लागि उच्चतम स्तर मा छैन।
यी उद्यमी परियोजना को लागि एक निवेशक कहाँ पाउन बारे सोच अघि विचार गर्नुपर्छ कि मुख्य कारक हो। उहाँले सफलतापूर्वक यो कार्य हल भने, तपाईं विशिष्ट साझेदार खोज इन्जिन को विचार गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। रूस मा एक सुरुवातमा मध्यम वा ठूलो उद्यम लागि निवेशक कहाँ फेला पार्न?
एक सुरुवातमा लागि निवेशक कसरी पाउन?
हामी एक सुरुवातमा को संस्थापक को विशेष लागि साझेदार लागि खोज सुरु। प्रतिज्ञा गर्नुभएको विचार - व्यापार को उपयुक्त प्रकारको मुख्य मान। सामान्यतया, यो भन्दा अन्य अवधारणाहरु संग originality, dissimilarity द्वारा विशेषता छ। सम्पूर्ण देशमा संवाददाता खण्ड वा एउटा विशेष क्षेत्रमा सञ्चालन कारोबारको कमी - आकलन सुरु को संभावनाहरु लागि अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड।
यो मास्को मा एक निवेशक जहाँ फेला पार्न समस्या solves गर्ने उद्यमी, पहिले नै प्रतियोगिहरु को गतिविधिहरु सक्छ रूसी राजधानी को रूप मा, रूस को क्षेत्रहरु मा बजार को कुनै पनि स्विच गर्न तैपनि निर्णय भनेर हुन्छ। जबकि क्षेत्रहरु मा यस्तै कारोबार पनि विकास गरिने छैन वा आर्थिक गतिविधि प्रजा रूपमा पूरै अनुपस्थित।
माथि, हामी निवेश आकर्षित लागि आधारभूत तंत्र छलफल। त्यहाँ एक सुरुवातमा लागि निवेशक पाउन बारेमा प्रश्न छ भने, यो मामला मा इष्टतम सर्किट हो: संलग्नता को उद्यम राजधानी लगानी, crowdfunding। दुवै तंत्र को लाभ - यो उद्यमी लागि कुनै ठूलो जोखिम। तथापि, उद्यम को मामला मा कम्पनी को सम्पत्ति मा एक शेयर दिइनेछ गर्न छ भन्दा अवस्थामा व्यापार मालिक परियोजनाहरु - वित्त यो प्रजाति पोर्टफोलियो लगानी रूपमा वर्गीकृत छ। तर, यो मामला मा, साझेदार सामान्यतया गर्न आवश्यक लागत को चोट लाग्छ परियोजना लागू। Crowdfunding लाभ पनि प्रस्ट छन् - लगानीकर्ताले गर्न दायित्व को सबै भन्दा को अभाव मा धन को एक ठूलो रकम आकर्षित गर्ने क्षमता छ।
एक विशेष योजना को भाग रूपमा सुरु-अप लगानी गर्न इच्छुक छ जो एक निवेशक म कहाँ पाउन सक्छौं?
हामी उद्यम राजधानी परियोजनाहरू कुरा भने, सक्रिय प्रासंगिक कानुनी सम्बन्ध संलग्न छन् कि विशेष कोष को एक ठूलो संख्या छ। तिनीहरूले रूसी संघ र विदेश मा हो, र दुवै सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू प्रतिनिधित्व। कहिलेकाहीं पर्याप्त बस तपाईं उद्यम परियोजना वा उद्यम राजधानी कोष लागि उपयुक्त पाउन, र त्यसपछि निजी संगठनों साझेदारीमा को संभावनाहरु मा कम्पनीहरु को प्रस्ताव हेर्नुहोस्।
यो crowdfunding गर्न आउँछ भने कसरी, लगानीकर्ताले र जहाँ तिनीहरूलाई फेला पार्न फेला पार्न? यो ढाँचा लगभग सम्पूर्ण अनलाइन कानुनी छ। दुवै रूसी र विदेशी - - त्यहाँ ठूलो को एक नम्बर हो kraudfandingovyh मञ्चहरूमा। तिनीहरूलाई प्रयोग पर्याप्त सरल छ, तर यो यसको लाभ बारेमा संभावित लगानीकर्ताले बताउन, व्यापार परियोजना को एक योग्य विवरण बनाउन महत्त्वपूर्ण छ।
एउटा सानो व्यापार को लागि एक निवेशक खोजी कसरी गर्ने?
एउटा सानो व्यापार को लागि एक निवेशक कहाँ पाउन अब विचार गर्नुहोस्। एक सुरुआतमा, तर पहिले नै, कार्य व्यवसाय बढी वा कम स्वीकार्य गति भइरहेको - कम्पनी को ढाँचा कम्पनी भनेर सुझाव। यस मामला मा निवेश विस्तार वा, देश क्षेत्रमा ब्रान्ड जागरूकता वृद्धि वा विदेश गर्न उत्पादन, ठूलो-मात्रा मार्केटिङ अभियान आधुनिकीकरण गर्ने खोजे। नियम, साना व्यवसाय निजी कम्पनीहरु संग मौलिक साझेदारी निर्माण विशेषज्ञ गर्ने लगानीकर्ताले को सहभागिता साथ financed छन्।
उद्यम राजधानी निवेश साझेदार व्यापार सिद्धान्त मा unprofitable हुनेछ किनभने आफ्नै निवेश फर्कन सक्ने छैनन् जो एक परिदृश्य अनुमति दिन्छ। एकदम उद्यमी को वृद्धि को खर्च मा राजधानी वृद्धि गर्न - बारी मा, मौलिक साझेदारी निवेशक कम्तिमा आफ्नो निवेश मा शून्य फिर्ती र भविष्यमा सुनिश्चित गर्न सक्षम हुने implies।
एउटा सानो व्यापार को लागि एक निवेशक कहाँ फेला पार्न? यस्तो समस्या सामान्यतया उद्यमीहरू र कम्पनी को विकास मा पैसा लगानी गर्न इच्छुक छन् जो संभावित साझेदार बीच व्यक्तिगत सभाहरूमा को पाठ्यक्रम हल छन्। व्यापार सम्मेलन, राउन्ड टेबल र प्रस्तुति - तिनीहरूले विशेष घटनाहरूको रूपरेखा मा आयोजित गर्न सकिन्छ। यसलाई उद्यमीहरू र लगानीकर्ताले बीच संचार सम्भव छ, र एक अनौपचारिक सेटिङ, एक कर्पोरेट पार्टी जस्ता जो तिनीहरूले बोलाइयो गर्न। मौलिक लगानी - वित्तीय सम्पत्ति वातावरण मा काम को एक साधारण प्रकार। तिनीहरूलाई बारेमा जानकारी पनि हुन खोज इन्जिन फेला गर्न सक्नुहुन्छ।
ठूलो उद्यम गर्न मध्यम लागि निवेशक कसरी पाउन?
एक एक मध्यम वा ठूलो व्यापार छ, व्यापार को लागि निवेशक म कहाँ पाउन सक्छौं? यो व्यापार को वर्तमान लाभकारी छ रूपमा, एक अनुभवी वित्तीय लागि मनमोहक लगानी लक्ष्य नै छ, नियम, रूपमा मध्यम आकारको कारोबार वर्गीकृत हुनत ठूलो मात्रा, आयोजित कि दृढ विचारणीय छ। तसर्थ, यो एक ठूलो उद्यम को मापदण्ड पूरा यदि कम्पनी पैसा लगानी गर्न इच्छुक साझेदार लागि, गर्न नहुन सक्छ, हेर्न सम्भव छ।
एक विश्वसनीय साझेदार, व्यापार विकास मा एक रचनात्मक संवाद निर्माण गर्न तयार हुनेछ जो एक निजी निवेशक, जहाँ फेला पार्न - तर, यो राम्रो सान्दर्भिक हुन सक्छ अर्को प्रश्न हो। संचार माध्यम निजी च्यानल मार्फत प्रमुख फाइन्यान्सरों संग - अनुमति नियम, गैर-सार्वजनिक तरिका, यो गर्न प्रदान गरिएको छ। तर केही अवस्थामा, वास्तवमा एक निवेशक प्रमुख घटनाहरू मा, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनियों मा, उदाहरणका लागि, आउँछ विशेष गरी जब पाउन, र। धेरै पक्षहरूमा मा साझेदार संग भवन सम्बन्ध संभावनाहरु व्यापार क्षेत्र भर पर्छन्।
यसरी, प्रश्न गर्न समाधान सूचना प्रविधि को क्षेत्र मा एक साझेदार फेला जस्ता कार्यहरू देखि भौतिक फरक हुन सक्छ "जहाँ निर्माण एक निवेशक फेला पार्न"। निर्माण व्यवसाय र आईटी - विभिन्न लाभकारी र विकास गतिशीलता संग क्षेत्र। तिनीहरूलाई प्रत्येक एक विशेष कम्पनी लगानी को संभावनाहरु आकलन मा निवेशक को विशिष्ट competencies आवश्यक छ। तर, पाठ्यक्रम, त्यहाँ फाइन्यान्सरों, उत्तिकै राम्रो निर्माण र सूचना प्रविधि पोख्त छन्। त्यसैले, लगानी खोज रणनीति पनि कम्पनीको मात्रा, साथै यो संचालित जो अर्थव्यवस्था को क्षेत्रहरु मा धेरै हदसम्म निर्भर छ। अन्य रणनीति - एक दृष्टिकोण, र साना व्यवसाय, मध्यम र ठूलो कम्पनीहरु लागि स्टार्टअपहरू लागि थप सम्भाव्य हुनेछ।
यो एक निवेशक फेला पार्न निर्णय गर्ने, र पनि तिनीहरूलाई एउटा भरोसा सम्बन्ध स्थापित गर्न उद्यमीहरू लागि सिफारिसहरू एक नम्बर विचार गर्न उपयोगी हुनेछ। स्टार्टअपहरू, साना, मध्यम वा ठूलो उद्यम - हामी विश्वव्यापी, पर्याप्त कुनै पनि आकार को व्यवसायीहरूको लागि उपयुक्त रूपमा विशेषता सकिन्छ कि रणनीति अध्ययन हुनेछ।
कसरी एक निवेशक फेला पार्न र तिनीहरूलाई सम्बन्ध स्थापित गर्न: सिफारिसहरू
वास्तवमा, बाहिर मान्छे संवाद जसमा सामाजिक वातावरण, मा कम्पनी प्रोफाइल नजिक गतिविधिहरु संलग्न उपयोगी पूरा गर्न एक निवेशक लागि खोजी। निर्माण को लागि एक निजी निवेशक कहाँ फेला पार्न - एक समस्या, यो बिक्री रुचि हुन सक्छ जो एक व्यक्ति अन्तरक्रिया स्थापित गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। प्रभावकारी लगानी - यो हदसम्म उच्च क्षमता, अक्सर वित्तीय को साँघुरो विशेषज्ञता भित्र हासिल को परिणाम हो।
अन्य कोष स्रोतहरू प्रयोग गर्न के संभावित साझेदार बताउन र उनको वास्तविक उपलब्धता के हो पहिलो स्थानमा कारोबार मालिकहरूलाई लगानी सल्लाह को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु। यो दृष्टिकोण निवेशक व्यापार संग सम्बन्ध मा आफ्नै भूमिका बुझ्न र यसलाई यकिन गर्न आफ्नो तत्परता आकलन गर्न अनुमति दिन्छ। तसर्थ, दृढ पनि ऋण रकम प्रयोग भने, आफ्नो मालिकले एक निवेशक व्यक्तिगत परियोजना financed छ भने भन्दा व्यापार को सानो शेयर भर गर्न सक्ने साझेदार स्पष्ट बनाउन सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण caveat - मूल परिवर्तन सम्झौताहरू को बातचीत। यो परियोजना विकास को पाठ्यक्रम छ कि थप वा कम लाभदायक देखाउन सुरु हुनेछ (वा लगानीको प्रतिफलको गतिशीलता) अपेक्षित व्यापार मालिक वा निवेशक भन्दा, र यसैले जसको लागि यो कम्पनी आफ्नै सहभागिता क्रम परिवर्तन गर्न बेहतर हुन सक्छ हुन सक्छ।
एक उद्यमी विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनका लागि आफ्नो साझेदार उत्तरदायित्व, यसको संरचना संग छलफल गर्नुपर्छ। केही लगानीकर्ताले उपयुक्त प्रकारको मात्र लेखा कागजात कम्पाइल आवश्यक, अरूलाई उत्पादन र उपयुक्त व्यवस्थापन रिपोर्टिङ। भागीदारी को पुराना चरणमा मा स्पष्ट गर्न उपयोगी यी nuances।
यो व्यापार लगानीकर्ताले कहाँ मात्र फेला पार्न, तर पनि कसरी उहाँको दीर्घकालीन भागीदारी संग स्थापित गर्न, त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। उद्यमशीलता मा क्षमता को उच्च स्तर सधैं सराहना गरिएको छ। तसर्थ, प्रभावकारी साझेदारी निर्माण मा पनि रुचि लगानीकर्ताले छ। तपाईं यसलाई सुन्न र व्यक्त चासो खातामा लिन तिनीहरूलाई सक्षम हुनुपर्छ।
तसर्थ, हामी वास्तविक निजी निवेशक जहाँ पाउन को प्रश्न जांच। यसको सफल संकल्प जो यो आकर्षित फर्म, यसको आकार, उद्यमीहरू र व्यवसायीक को क्षमता को स्तर, को गतिविधि को स्कोप मा निर्भर गर्दछ। एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रगति दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण गर्न निवेशक सम्झौता गरिएका समीक्षा गर्न आवश्यक छ भने, अन्य सर्तहरू र दृढ वित्त को अवस्था, साथै मालिक को इच्छुकता द्वारा प्ले छ।
राज्य लगानीको नीति
लगानीको व्यवस्थापन उपकरण रूपमा कम्पनी लगानीको रणनीति
बीमा कम्पनीहरु को लगानी गतिविधि। अवधारणा र सार।
विदेशी लगानी - देश को वित्तीय राम्ररी हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश।
Krambambulya - यसको इतिहास संग बेलारुस पेय
कसरी भण्डारण गर्न मह - सुझाव र सानो रहस्य
पार्क "स्कारलेट Sails" (वोरोनिश): पूर्वाधार
खुट्टा जोइन्टहरूमा: गठिया र अन्य रोगहरु
फारसी चक्रवामेन। पुनरुत्थान र बीउबाट खेती
सबै भन्दा ठूलो गोही फिलिपिन्समा बस्ने
Heisenberg गरेको अनिश्चितता - को microworld गर्न ढोका
प्रोस्टेट आफैलाई मालिश